Ntuli aka onye isi UNWTO: "Atụrụ m anya na ọtụtụ mba ga -eso Zimbabwe"
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ mkpakọrịta » Kọmitii General Secretary UNWTO: "Enwere m olileanya na ọtụtụ mba ga-eso Zimbabwe"
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa na Georgia • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ kacha ọhụrụ na Zimbabwe
Kọmitii General Secretary UNWTO: "Enwere m olileanya na ọtụtụ mba ga-eso Zimbabwe"
"Atụrụ m anya na ọtụtụ ndị otu ga -agbaso ihe nlereanya Zimbabwe site n'ịchọ nkọwa ọ bụghị naanị na iwu adịghị mma kamakwa ọtụtụ omume nchịkwa, enweghị ụkpụrụ na mkparị na -etinye ọdịnihu nke nzukọ a n'ihe egwu. Ndị odeakwụkwọ na -eti mkpu maka ezigbo nyocha njikwa n'ime. Ntuziaka ndị Zimbabwe nyefere yiri ka ọ bụ nzọ ụkwụ ziri ezi, nke ịdekọ odeakwụkwọ, "ndị a bụ okwu onye ama ama n'etiti ndị otu UNWTO." eTN egosighi aha ya.
N'izu gara aga, Hon. Walter Mzembi, Onye isi oche nke UNWTO Regional Commission for Africa (CAF) na ijere Zimbabwe ozi dị ka minista na -ahụ maka njem nlegharị anya na ile ọbịa. gbakwunye ihe na usoro nke UNWTO General Assembly na ikwurita nhọpụta na nhọpụta odeakwụkwọ UNWTO. A ga -eme ọgbakọ ọgbakọ UNWTO ọzọ maka Septemba ka a na -eme ya na Chengdu, China.
Ọtụtụ nzaghachi eTN enwetara site na isi mmalite tozuru oke na ndị otu UNWTO dị n'ime kwuru na arịrịọ Mzembi nwere ike ịdị mma ma baa uru, mana ịgbakwunye ihe ndị ahụ na ya bụ ihe ekwesịghị ịbụ ihe efu. Somefọdụ na -ekwu na mmadụ kwesịrị ịtụ anya na ọ ga -akwụsị ọtụtụ ihe wee kwụsị igbu atụmatụ a.
Ka ọ dị ugbu a, Dr. Walter Mzembi chọrọ ime ka ahụ ruo ndị nwere ike iche na atụmatụ a bụ naanị maka ebumnuche Mzembi ịbụ onye isi odeakwụkwọ UNWTO ọzọ. Ọ gwara eTN: “N'adịghị ka ahịrị na -agba na ngalaba nke odeakwụkwọ UNWTO nke chọrọ ibelata ezigbo oku maka ndozigharị usoro ntuli aka archaic ka ọ bụrụ ọgụ dị n'etiti mụ na Zurab na mkpọsa nwere oke megide Zimbabwe, enweghị m iwe ma ọ bụ n'ihu onye ọ bụla gụnyere onye odeakwụkwọ ukwu ugbu a, onye m ka na -ewere dị ka enyi. ”
“Ma ezi ọbụbụenyi na -achọ ichebe ihe nketa onye ọzọ site na inye ndụmọdụ ziri ezi. A na -edekwa ihe nketa site na ịhapụ nzukọ n'aka aka ruru eru yana nchekwa, nke ahụ bụ ọrụ nke ụkpụrụ ziri ezi na iwu usoro. Dị ka akụkụ nke ndị otu Onye Isi Odeakwụkwọ Ọchịchị ugbu a na -akwụsịghị akwụsị ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri, anyị nwere ike ịta ntaramahụhụ mkpokọta nke enweghị ike ime nke ọma. Yabụ na ọ bụghị nke ukwuu maka onye nnọchi anya Zurab Pololikashvili bụ onye ritere uru na usoro adịghị mma mana anyị nke na -emeghị ka usoro sie ike, m na -ekwukwa na akabeghị oge idozi nke a site na inye ndụmọdụ ziri ezi na nka. ”
Mmetụta dị elu: Onye isi nlekọta njem nlegharị anya ọzọ metụtara na UNWTO na -agbasaghị na Zimbabwe ma ọ bụ Afrịka mere ka ọ pụtakwuo nke ọma n'ịgwa ya. eTurboNews:
"Onye odeakwụkwọ ukwu agaghị abịarute na Mgbakọ General na -enwe mmetụta nke enweghị nkwekọrịta ịmekọrịta, n'enwetaghị ntaramahụhụ ọ bụla, ya na ndị otu kacha nwee ọmịiko na -efu ọdịnihu ụlọ ọrụ ahụ."
“Ọ bụghị maka ịwakpo ya ma ọ bụ onye ọ bụla. Ọ bụ maka ikpughe ezi ọnọdụ nke anyị nọ ugbu a. Kama ịhapụ ezigbo odeakwụkwọ na -ejere ndị njem nlegharị anya ụwa na ndị metụtara ya aka, a ga -enyefe onye odeakwụkwọ ike gwụrụ - yana ndị ọrụ nwere nkụda mmụọ - n'aka aka na -enweghị ike nke nwere ike ịtụfu nzukọ niile n'elu ugwu. Enwere ndị mmadụ na -elekọta, ndị na -ele anya na ndị na -ahụ karịa ákwà mgbochi nke mgbasa ozi a. “